Mashruucii Ugaadhsiga Xayawaanka Diinka Oo istaagay ,Mucjisooyinka Ku Habsaday Dadkii Hungurigu u Geeyay
Tuesday March 06, 2018 - 11:06:19 in Maqaallo by Reporter Burco
Burco-inta la Xaqiijiyay 9 Qof oo Ganacsi ka da'yay Xayawaanka Diinka Deegaamadda Gobolka Togdheer dhawaan ayaa waxyeelooyin kala duwani ka soo gaareen ,ka dib markii ay ka soo qaateen Goobihii uu ku noolaa ,halka qaarna Dilaaleen .
Burco-inta la Xaqiijiyay 9 Qof oo Ganacsi ka da’yay Xayawaanka Diinka Deegaamadda Gobolka Togdheer dhawaan ayaa waxyeelooyin kala duwani ka soo gaareen ,ka dib markii ay ka soo qaateen Goobihii uu ku noolaa ,halka qaarna Dilaaleen .
Dadkan oo ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah Cayladooda iyo Dad loo geeyay si ay u Dabiibaan ayaa dhibaatooyinka soo gaadhay waxay iskugu jiraan ,Qaar ka mid ahi way Waasheen ,Qaarna Lugaha iyo Gacmaha ayaa Qalalay ,halka kuwo kale-na ay Nabaro Waaweyni oo sidii Bararisada ahi ka soo baxeen .
Dadkan ayaa Xaaladooda waxba lagaga qaban-kariwaayay Goobo Caafimaad oo la geeyay ,laakiin markii danbe waxa loo Diray Goobaha Cilaajyada ,si Quraan loo saaro.
Qaar ka mid ah Diimankan ayaa markii ay dadkii Sitay dhibaato ka soo gaadhay waxa Qasab noqotay in lagu celiyo halkii laga soo qaaday .
Todobaad ka hor ayay ahayd markii Aabe ka soo jeeda Deegaanka Laascaanood uu ka Warbixiyay Wiil uu dhalay oo Waxyeelo ka soo gaadhay Xayawaanka Diinka oo uu soo qaatay ka dib markii la yidhi waa lagaa iibsanayaa.
Halka sidoo kale-na deegaanka gobolka Sool Qof Diinkaasi Sitay uu ku Dhintay iyadoo Sanaagna la sheegay in ay sidan oo kale ka dhacday iyo weliba deegaamada kale ee Somaliya.
Waxa xusid mudan Ugaadhsiga Xayawaankan Diinkan oo 3-bilood ee u Danbeeyay Somaliland ka jirtay iyo Somaliyaba ayaa waxa kale oo Khasaare Ba’ani ka soo gaadhay Gaadiidkii qaaday oo sida la xaqiijiyay Badidoodii ku qalimay Gobolada Togdheer ,Sool iyo Sanaag ,taasi oo keentay in Gaadiidku ka xanaaqaan Qaadista Diinka.
Geesta kale Mucjisooyinkan Dadkan iyo Gaadiidkani kala kulmeen Ugaadhsiga Xayawaanka Diinka Bariga Somaliland ayaa horseeday in Xayawaankaasi Ugaadhsigiisa layska dhaafo ama la Joojiyo ka dib markii laga Baqay ,sida la xaqiijiyay .Waxaana dhacday in Xiitaa Masaajidada Burco Culimadu ka cadaysay ,Ciqaabta Alle Ee ka dhalanaysa Xadgudubka Xayawaankaa inala Deegaanka Ah ,taasi oo toos loo arkay..
Waxaana mahad iska leh ilaahay oo Awoodiisa ku joojiyay kuwii Xad-gudubka iyo Kibirka Xayawaankiisaa ku hayay .
Waxaanan leeyahay cidkastoo arintan Joojinta Ugaadhsiga Diinka gacan ka gaysatay ,Haday Saxaafada tahay ,Haday Dawlada tahay ,Haday Culimo Tahay iyo Haday Shicib Tahayba ilaahay Jasaa’iI Khayr-qaba haydiinku bedelo ,Waayo wax xaga ilaahay ,xaga Deegaankeena iyo xaga aadamahaba ku wacan ayaad qabateen ,oo Ciqaab alle ka dhalanayso.
Hawlahana halkaa halaga sii wado ,sidii aynu Nimcooyinka ilaahay ina siiyay u ilaashan lahayn.
Qalinkii: Mahad Faarax .
(Shakhsi Ka Soo Horjeeda Ugaadhsiga iyo Ganacsiga Duurjoogta ).